Sayensị ingtụnanya Na-akpata Metụta na Nnwale | Martech Zone
Sayensị Na-eju Anya Na-akpata Metụta na Nkwenye
Na Tọzdee, Septemba 2, 2014 Sunday, October 4, 2015 Douglas Karr
Anọ m na-ekwu okwu banyere nlelị m na panacea kachasị ọhụrụ nke otu esi mmetụta ahịa a na-ere n'onlinentanet. Ọ bụ ezie na m kwenyere na ndị na-eme ihe ike nwere oke iru na ụfọdụ mmetụta, ekwetaghị m na ha nwere ike nke ikwenye na-abụghị nke ihe ndị ọzọ. Marketingzụ ahịa ahịa na-achọ atụmatụ karịrị ịtụfu ụfọdụ tiketi na onye na-eme ihe ike ma ọ bụ na-echegharị.
Dabere na Dr. Robert B. Cialdini, onye edemede nke Mmetụta: Sayensị na Omume (Agba nke Ise)M nwere ike n'elu ihe. Nyocha ya achọpụtala na enwere ndị isi isii ga - achịkwa ma mee ka ndị mmadụ kwenye:
Mgbapụta - ibu ọrụ iji nyeghachi ihe ị natara n'aka ndị ọzọ.
Ogwu - ndị mmadụ chọrọ karịa nke ihe ndị ahụ enwere obere.
Njikwa - ndị mmadụ ga-agbaso ụzọ nke ndị ọkachamara nwere nkwenkwe na ihe ọmụma.
Ikike - arụ ọrụ site na ile anya na ịrịọ maka obere nkwa mbụ enwere ike ịme.
Na-ekiri - ndị mmadụ na-ahọrọ ịsị ndị ha masịrị ha.
otutu mmadu kwenyere - ndị mmadụ ga-ele anya na omume ndị ọzọ iji chọpụta nke ha.
a ozi sitere na mgbe obula na-egosipụta ụkpụrụ 6 zuru ụwa ọnụ nke Nsonaazụ na Nmegide:
Nke a bụ nkọwa zuru ezu banyere Mmetụta na Nmegide na vidiyo animated Mmetụta na-arụ ọrụ (IAW):
Tags: ikikenkwenyeagbanwe agbanweịme mkpebiDr. Robert B. Cialdinimmetụtammetụta na ọrụmmetụta ahịaamasịkwenyePsychologynnyefeRobert B. Cialdinin'ụkọ
Douglas Karr Tuesday, September 2, 2014 Sunday, October 4, 2015
Etu ị gha esi azuma ahia na Twitter na akwalite Tweets
Sep 6, 2014 na 1: 14 AM
Nke ahụ bụ n'ezie ezigbo isiokwu gbasara otu esi emetụta ndị ahịa ime ka azụmahịa baawanye !!